Depiote miisa 53 etsy amin’ny 13 Mai : Mangataka ny governemanta Mahafaly hametra-pialana -
AccueilSongandinaDepiote miisa 53 etsy amin’ny 13 Mai : Mangataka ny governemanta Mahafaly hametra-pialana
Depiote miisa 53 etsy amin’ny 13 Mai : Mangataka ny governemanta Mahafaly hametra-pialana
Vao tsy ela akory izay no nilokaloka tamin’ireo olona mpanara-dia azy tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai fa tsy hivadika amin’izay nifanarahana hatrany am-boalohany ireo depiote miisa 53 mpitarika ny fitokonana. Nambara tao anatin’izany fa tsy mahalala afa-tsy lalan-kevitra tokana ireto depiote ireto dia ny fanesorana ny Filoha. Nilaza teo imason’ireo mpomba azy ihany koa ny depiote Tinoka Roberto, fa tsy hisy hiditra ao anatin’ilay governemanta iraisana araka ny didy navoakan’ny Hcc ireto depiote ireto. Tsy nifanaraka tamin’ny fitakiana niharo fampihorohoroana nataon’izy ireo tamin’ny Hcc mantsy iny didy nivoaka iny raha ny fanambarana nataon’izy ireo teny an-kianja. Nilaza ny tsy hisaraka amin’ireto vahoaka ireto araka izany ireo depiote miisa 53 ireto. Ankehitriny anefa, zavatra hafa no ataon’ireto mpitarika. Ny nivoahan’iny didy avy eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana iny mantsy no ela dia efa nisora-tena ho maro an’isa ireto depiote ireto, ka tokony ho izy ireo no hanolotra ny anaran’izay ho praiminisitra.
Tsy nijanona teo amin’izay hevitra izay fa dia notanterahina tokoa ilay fanolorana an’i Christine Razanamahasoa ho an’ny Mapar. Mifanindran-dalana amin’izay, dia mitaky ny hametrahan’ny governemanta Solonandrasana Mahafaly Olivier fialana faobe ireto mpanohitra ireto. Ampiasaina avokoa na ireo mpanao politika namany, indrindra ireo mpanentana ny Miara-manonja, entina hitakiana ny amin’ny tokony hanaovan’ny governemanta fialana io. Ny antony, dia efa maika hipetraka amin’ny seza ireto mpanao politika ireto. Tsy ho tratra mantsy izany tanjona izany raha toa ka mbola am-perinasa ny governemanta ankehitriny, ka dia atao indray izay hanerena azy hiroso amin’izay fametraham-pialana izay. Adino sahady araka izany ilay lokaloka nifanaovana tamin’ireo mpitolona teny an-kianja. Voaporofo ihany koa fa kobaka am-bava no betsaka fa tsy mahazaka mahita seza ireto depiote milaza ny hitondra fanovana ireto. Na dia mbola tsy mahita aza, fa maheno ny anarany fotsiny dia efa tsy mahatana ny teny nifanomezany tamin’ny mpomba azy sahady izy ireo. Miha mazava araka izany fa ny hitady seza no tena tanjon’ny fanakorontanan’ireto depiote ireto ny firenena, fa tsy ny hitondra fanovana araka izay voiziny akory.